पोखरा, वैशाख । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले समयको मागसँगै विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएका विषय पढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१३...
स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम हुँदै
काठमाण्डौ, बैशाख । काडमाण्डौ विद्युतीय व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई लक्ष्ति गर्दै आगामी शनिबार स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने...
आधिकारिक ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन विजयी
काठमाण्डौ, बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ‘राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन’विजयी भई आधिकारिकताको मान्यता पाएको छ । ट्रेड युनियनको बिहीबार भएको चुनावमा कर्मचारी संघल...
पैसामा होइन गुणस्तरमा ध्यान दिऊ ः अध्यक्ष पटेल
वीरगञ्ज,बैशाख । पर्सा विद्युतीय व्यवसायी संघ,वीरगञ्जका अध्यक्ष कृष्ण पटेलले पैसालाई नहेरी सामानको गुणस्तरलाई हेरेर सामान प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतमा लोकप्रियता कमाउन सफल सीके विरल्ला ग्रु...
नीति तथा कार्यक्रम : मेरो सरकारुबारे देउवालाई ओलीको जवाफ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको ुमेरो सरकारु शब्द सोचेर विचार गरेर प्रयोग गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बचाउ गरेका छन्। &nb...
दार्चुलामा सिसा खानी उत्खनन् शुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे दार्चुलामा पहिलो पटक सिसा खानी उत्खनन् शुरु गरिएको छ । टोरेक्स माइन्स नेपाल प्रालिले महाकाली नगरपालिका–६ बरमुडे र शैल्यशिखर नगरपालिका–४ रानीशिखरमा सिसा खानी...
गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षको एकल निर्णयले चल्यो डोजर ,गाउँ कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको असन्तुष्ट
काठमाडौं। गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानामगरले एकलौटी निर्णय गर्दै गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेका छन् । अध्यक्ष रानामगरले आफ्नो घर नजिकै केन्द्र राख्ने एकलौटी निर्णय लिएका हुन् । ...
इलेक्ट्रिसियन संघद्धारा जेष्ठ नागरीकलाई फलफुल वितरण
बैशाख , हेटौडा । १३०औ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा हेटौडा इलेक्ट्रिसियन संघ मकवानपुरले जेष्ठ नागरीकहरुलाई फलफूल तथा खाद्यान्न बितरन कार्यक्रम गरेको छ । संघले हेटौडा १५ रातोमाटेमा अवस्थित दिब्य...
आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग
काठमाण्डौं,बैशाख । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग...
९० प्रतिशतलाई ब्रस गर्न आउदैन : डा. घिमिरे
काठमाण्डौ, वैशाख । ऊँ समाज डेन्टल हस्पिटलका प्रमुख डा. सुभाष घिमिरेले ९९ प्रतिशत नेपालीहरुले दाँत ब्रस गर्ने भए पनि ९० प्रतिशत मानिसलाई दाँत माझ्न नआउने बताएका छन् । १३० औ अन्तराष्ट्रिय श्रम दिवसको...
बैशाख,नवलपरासी । प्रदेश नं ५ सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई राहत हुने गरी नीति तथा कानून निर्माण गर्ने भएको छ । समृद्धिको मुख्य आधार नै घरेलु उद्योग भएकाले यी उद्योगको प्रवद्र्धनबाटै समृद्धि...
प्रधानमन्त्री ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको बिजुली बस ६ महिनादेखि ग्यारेजमै
काठमाण्डौ, बैशाख । सरकारले ल्याएको बिजुली बस ६ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले गत कात्तिकमा भित्राएका पाँचवटा बिजुली बस ६ म...
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरले साधरण शेयर निष्काशन गर्दैै
काठमाण्डौ, बैशाख । ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधरण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोलखामा निर्माणधीन ४० मेगावाट क्षमताको खानीखोला–१ जलविद्युत आयोजनाको सर्...
५ प्रतिशतले मल्टिस्ट्रयाण्ड केबुलमा मूल्यवृद्धि
काठमाडौ, बैशाख । हाउस वायरिङ गर्दा प्रयोग हुने मल्टिस्ट्रयाण्ड केबुलको मूल्य वृद्धि भएको छ । २०७६ बैशाख १५ देखि लागु हुने गरी मल्टिस्ट्रयाण्ड केबुलको मूल्यमा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।...
जाजरकोट, बैशाख । तीन महिनादेखि डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा विद्युत् सेवा नहुँदा यहाँका स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि सबैभन्दा बढी समस्या जिल...